SCS Software: chiito chakanaka kupokana nekenza yemazamu | Linux Vakapindwa muropa
SCS Software: chiito chakanaka kupokana nekenza yemazamu
SCS Software iri kubata chiitiko chakanaka kupokana nekenza yemazamu murori simulator Euro Rori Simulator 2 uye muAmerican Rori Simulator. Ichagara kusvika Svondo ino, saka imi mose mune zita iri reGNU / Linux distro yenyu munogona kutora chikamu zvakare. Zvese zvinoitika kusvika Svondo, Gumiguru 6 na 23:59 UTC, zvichapihwa mumwedzi uno wekuziva nezvechirwere ichi.
Ribhoni dzepingi uye neruvara rwepingi zvichave nekuvapo kwakawanda mukati memwedzi uno padanho repasirese rekuziva nezve gomarara repazamu. Mushandirapamwe wegore negore unotarisira ku wana mabhenefiti ekupa kugadzirisa hutano hwevanhu ava uye nekutsvagisa kurwisa. Vagadziri vemarori kupota pasirese vanozviita, uye vakafemerwa navo, uyu mugadziri wevhidhiyo yemutambo achabatanawo nemushandirapamwe uyu
Zita rechirongwa ichi Pink Ribhoni Chipfuva CheCancer Kuziva! SCS Software inobvunza nharaunda kutenderera pasirese kuti itsigire chikonzero nePink Ribbon zvigadzirwa muEurope neUnited States. Vachaita chiitiko chepasi rose chinonzi Pink Ribbon Charity Nyika yeMarori. Kushanda pamwe zviri nyore kwazvo, haufanire kuenda chero kupi, kana chero chinhu chakadai, unogona kuzviita kubva mumitambo yemavhidhiyo ivo pachavo. Saka kana usina Euro Rori Simulator 2 kana American Rori Simulator, unogona kuzvitenga izvozvi paStam.
Kuti ubatsirane, unofanirwa kupinda mumutambo wevhidhiyo, mune chero maviri, uye mibairo ichapihwa kune zvinangwa pachako uye nharaunda. Kununura gumi nembiri kana kupfuura Pink Ribhoni chinhu chinounzwa chinoita kuti ive yakasarudzika vaviri logo yekurembedza tsiva magurovhosi sechinhu cheStam chinhu. Kana nharaunda ikakwanisa mamirioni Pink Ribhoni chinhu chinounzwa, iwe unowana zvakare peya yeanorembera madhaisi mune iyo Steam hesera. Kuti ukwanise kudaro, iwe unongofanirwa kubatanidza account yako yemutambo neWorld Of Marori account uye sarudza.
Akaundi - Nyika yeMarori
Mamwe mashoko - Ona pano
Rarama kutepfenyura kwechiitiko - pfura
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » SCS Software: chiito chakanaka kupokana nekenza yemazamu